जीवनशैली – SabKura Samachar
LeaveaComment / धर्मसंस्कार / By Sandip Oli
काठमाडौ । बिबाहित महिलाले मात्र सिन्दूर लाउने हाम्रो हिन्दू धार्मिक परम्परा रहेको छ । सिन्दूर एउटा यस्तो शक्ति हो । यो विवाह गरेर आफ्नो पतिले आफ्नो पत्निलाई केबल जुनि जसुनि संगै साथ दिन र आफ्ना हरेक अफ्ठयाराहरु पार गर्नको लागि दिइने उपहार हो । केबल एक चिम्टि सिन्दूर दुइ जनाको सम्बन्ध प्यारो बनेको हुन्छ । …
जान्नुहोस् महिलाले लगाउँने सिन्दूरको वैज्ञानिक दृष्टि Read More »
आज २०७७ बैशाख १७ गते बुधबार, ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश
तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिष एस्ट्रोलोजर राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ- मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ अध्ययनमा सफलता मिल्नेछ । व्यावसायिक सफलता । आफन्तबाट जोगिनुहोला । धार्मिक कार्यमा मन लाग्नेछ । लामो दूरीको यात्रा नगर्नुहोला । बृष – इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो …
आज २०७७ बैशाख १७ गते बुधबार, ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश Read More »
LeaveaComment / सौन्द्धर्य / By Sandip Oli
हाम्रो गाँउघर वरपर सहज रुपमा पाइने बनस्पति पुदिना स्वास्थ्यका लागि यति धेरै लाभदायक छ भन्ने कुरा सायदै थाह होला । तर आज हामी पुदिनाले स्वास्थ्यमा पुर्याउने फाइदाका बारेमा जानकारी दिन लागिरहेका छौँ । के हो पुदिना ? पुदिना जसलाई मुख र सास स्वच्छ राख्ने बस्तुको रुपमा लिइन्छ । पुदिना करीब दुई दर्जन प्रजातिमा भेटिन्छन भने …
पुदिनाको फाइदै फाइदा Read More »
यति खेर अत्यधिक जाडोको मौसम छ । ठिक यहि बेला हाम्रा हात, खुट्टा, गाला, ओठ बढी फुट्ने गर्छ । तर यो साधारण स्वास्थ्य समस्या हो ।अरु भन्दा ओठ शरीरको सानो भाग भएकोले पनि यो फुट्यो अलि धेरै समस्या पार्छ । ओठ फुटेपछि केही खाँदा पोल्ने, हाँस्दा दुख्ने र अनुहारको सौन्दर्य बिग्रने हुन्छ । जाडोमा किन …
जाडो मौसममा ओठ किन फुटछ ? समाधान के हुनसक्छ ? Read More »
यी हुन् टाउकोमा पर्ने जुम्राबारेका ११ रोचक तथ्य
तपाईँले आफ्नो टाउकोमा जुम्रा परेको अनुभव गर्नु भएको छ । छैन भने ठिकै भयो यदि छ भने तत्काल व्यवस्थापन गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । नेपालका ग्रामिण क्षेत्रमा अहिलेपनि धेरै व्यक्ति कुनै न कुनै समयमा जुम्राबाट पिडीत भएको देखिन्छ । प्राय बच्चा बेलामा जुम्राले सताएको देख्ने गर्दछौँ । कसैकसैलाई बयस्क र बृद्ध बेलामा समेत जुम्राले सताउने गरेको …
यी हुन् टाउकोमा पर्ने जुम्राबारेका ११ रोचक तथ्य Read More »
LeaveaComment / यौन स्वास्थ्य / By Sandip Oli
सेक्स गरिरहेका बेला एक अर्कालाई भरपूर सन्तुष्टि दिन महिला अथवा पुरुष दुबैले धेरै मेहनत गरिरहेको हुनसक्छ । सेक्सका दौरान अपनाइको तरिकाले सन्तुष्टि पनि देला तर सेक्स गरे लगत्तै तपाईंको पार्टनर पढ्न बस्नुभयो भने तपाईंलाई कस्तो महसुस होला हो, सेक्सपछि गरिने यस्तै गल्तीहरु जुन तपाईंले गल्ती गरेको महसुस नगरेपनि यसले तपाईंको पूरै सेक्स लाइफलाई नै बरबाद …
यौन सम्पर्क गर्ने बितिकै के के गर्नु हुदैन, जान्ने पर्ने यी ५ कारण Read More »
१९ वर्षीया किशोरीको दुईवटा योनी भेटियो
एजेन्सी । बेलायतका एक किशोरीको दुईवटा योनी भेटिएको छ । बेलायत गिलिङघाम केन्टस्थित १९ वर्षीया किशोरी मोली रोज टेलरमा महिनावारी समस्या थियो । महिनावारीमा समस्या भएपछि उनी अस्पताल गएकी थिइन् । डाक्टरले उपचारको क्रममा मोलीको दुईवटा योनी भएको पत्ता लगाएको हो । ९ वर्षको हुँदादेखि उनले महिनावारी निकै पीडादायी भएको बताउँदै आएकी थिइन् । चिकित्सकले …
१९ वर्षीया किशोरीको दुईवटा योनी भेटियो Read More »
पाथिभरा देविको दर्शन गरि चोखो मनले आफ्नो राशिफल पढ्नु होस् ,जय माता
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) – पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रबाट राम्रो लाभ मिल्ने योग छ । पढाइलेखाइमा प्रगति हुनेछ । बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ, नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने योग छ । ठूलाबडाको आशीर्वादले रोकिएको काम बन्नसक्छ । आत्मबल बढ्ने छ । शत्रुहरू पराजित हुनेछन् । मातापिता र अभिभावक वर्गको आशीर्वचन …
पाथिभरा देविको दर्शन गरि चोखो मनले आफ्नो राशिफल पढ्नु होस् ,जय माता Read More »
मुखको सरसफाई कसरी गर्ने ?
LeaveaComment / स्वास्थ्य / By Sandip Oli
हामी आफ्नो छाला तथा केशको बारेमा अति नै सम्वेदनशील हुन्छौं । यसका लागि हामी विभिन्न किसिमका उत्पादनहरुको प्रयोग गर्छौंं । तर, जब कुरा मुख (ओरल) को स्वास्थ्यको कुरा आउँछ, हामी त्यति वास्ता गर्दैनौं । तर, वास्तविकता के हो भने हाम्रो शरीरमा जाने हरेक प्रकारका पोषक तत्व, भाइरस तथा ब्याक्टेरियाको सबैभन्दा प्रमुख बाटो भनेको नै मुख …
मुखको सरसफाई कसरी गर्ने ? Read More »
फाइब्राएडः बढ्दो उमेरका महिलाहरुमा देखिने गम्भिर बिरामी
प्रायः महिलाहरुमा चालिस वर्षपछि महिनावारीको क्रममा रक्तस्राव बढ्ने, कम्मर, पेट तथा हात–खुट्टा बढी दुख्ने जस्ता विभिन्न समस्याहरु उत्पन्न हुन्छन् । कहिलेकाहीँ महिनावारी पनि अनियमित हुन्छ । महिनावारी हुँदा पेट असह्य दुख्छ । महिनावारीमा रक्तस्राव पाँच दिनसम्म हुन पर्नेमा आठदेखि दश दिनसम्म हुन्छ । शरीरमा रगतको कमी हुन्छ । कमजोरी र ज्वरो आउने जस्ता समस्याहरु देखिन्छन् …
फाइब्राएडः बढ्दो उमेरका महिलाहरुमा देखिने गम्भिर बिरामी Read More »